Daacish oo ku hanjabtay inay qoorta ka jari doonto laba nin oo u dhashay Japan, haddii aan la siin 200 oo milyan oo dollar - iftineducation.com
Daacish oo ku hanjabtay inay qoorta ka jari doonto laba nin oo u dhashay Japan, haddii aan la siin 200 oo milyan oo dollar
iftineducation.com – Dowladda Khilaafada Islaamka, ayaa waxay ku hanjabtay inay xuku qoor-goysmo ah ku fulin doonto laba nin oo u dhashay dalka Japan, haddii aynaan Dowladda Japan ka bixin adduun lacageed oo dhan 200 oo milyan oo lacagta Mareykanka.
Labada nin ee gacanta ugu jira Dowladda Khilaafada Islaamka, ayaa waxaa lagu kala magacabaa Kenji Goto Jogo iyo Haruna Yukawa.
Daacish, ayaa Internet-ka ku baahisay Muuqaal ay ka soo muuqdeen labada nin ee reer Japan, oo uu dul taagan yahay mid ka mid ah dagaal-yahanada Daacish, oo mindi gil gilaaya.
Ra’iisal Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo booqasho ku maraaya Bariga Dhexe, ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay wuxuu ku sheegay, inaanay Japan waxba ka bedeli doonin siyaasadeeda, isla-markaana aynaan diyaar u ahayn bixinta lacagahaasi.
Shinzo Abe, ayaa ku cago jugleeyay haddii aan labadaasi nin la fasaxin, inaan leeskaga hari doonin waxyeelo loo geysto, ayna Japan diyaar u tahay falcelin ay ka bixiso.
Labada nin ee u gacangalay Daacish, ayaa waxaa labaduba laga qabtay gudaha dalka Suuriya, mid ka mid ah waa Suxufi waxaana lagu magacabaa Kenji Goto Jogo, iyadoo midka kalana uu Suuriya geeyay shirkad militari, oo filimada sameysa.
Riwaayad qosol la Ooyeen dadkii daawadey -Muuqaal funny ah
Maxkamadda Kampala oo wax dembi ah ku weyday laba hablood oo Soomaali ah